फिल्म पाएको खुशी !
काठमाडौं । मरुभूमिमा पानीका लागि तड्पिरहेको मानिसले सर्बत भेट्यो भने के गर्ला ? निश्चय नै उसको खुशी दोब्बर हुन्छ । यस्तै अवस्था छ अहिले, नम्रता सापकोटाको पनि ।
फिल्म खेल्छु भनेर मैदानमा आएकी थिइन् तर एउटा/दुइटा फिल्मपछि कसैले उनलाई पत्याएनन् । उनले पछिल्लो समय सुटिङ गरेको फिल्म ‘समर लभ’ थियो, जुन रिलिज भएकै एक वर्ष नाघिसक्यो ।
समग्रमा दुई वर्षयता उनले फिल्मको सुटिङ देख्न पाएकी थिइनन् । तर, यसै साता नम्रताले नयाँ फिल्मको सुटिङ थालेकी छिन्, ‘डेसान’ नामको । फिल्ममा उनले नयाँ मोडलसँग जोडी बाँधेकी छिन् ।
तर, फिल्म पाएको खुशी लुकाउन उनलाई गाह्रो भइरहेको छ । यस्तोमा हिरोइनले फिल्मको दृश्य फेसबुकमा राख्नु त सामान्य भइहाल्यो, नम्रताले गरेकै छिन् ।
त्यतिले पनि चित्त नबुझेर उनले फिल्ममा आफू विवाहित महिला रहेको, स्वार्थी रहेको र नेगेटिभ खालको भूमिका गरिरहेको समेत मिडियामा बताउन भ्याइरहेकी छिन् । उनी फिल्म पाएकोमा खुशी छन्, मान्यौँ हामीले । तर, खुशी छन् भन्दैमा हामीले फिल्मको सबै कथा पहिला नै सुन्नुपर्ने ?